ဘဝရညျမှနျးခကျြလမျးကွောငျးပျေါကို ပွနျလညျရောကျရှိနိုငျမယျ့အဆငျ့ ၃ ဆငျ့။ – SoShwe
Home/LifeStyle/ဘဝရညျမှနျးခကျြလမျးကွောငျးပျေါကို ပွနျလညျရောကျရှိနိုငျမယျ့အဆငျ့ ၃ ဆငျ့။
ဘဝရညျမှနျးခကျြလမျးကွောငျးပျေါကို ပွနျလညျရောကျရှိနိုငျမယျ့အဆငျ့ ၃ ဆငျ့။
admin June 14, 2020	LifeStyle Leaveacomment
သငျ့ရဲ့ဘဝ လကျရှိအခြိနျအခါမှာ ဘယျနရောကိုဦးတညျနတေယျဆိုတဲ့မေးခှနျးကို မိမိကိုယျကို ပွနျမေးဖို့ဆိုတာ လုပျကိုလုပျသငျ့တဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုတှကေ ဘယျကိုဦးတညျနတေယျဆိုတာ၊ ကိုယျ့ရဲ့မှနျကနျတဲ့ရှေးခယျြမှုတှကေို လုပျရဲ့လားဆိုတာ၊ မိမိကိုယျကို ပွနျမေးခှနျးထုတျမိနပွေီဆိုရငျ သငျ့လိုမြိုး အခွားသူတှလေညျးပဲ အဲဒီလိုမေးခှနျးထုတျနတေတျတယျဆိုတာကို သိထားရပါမယျ။
သငျ့ဘဝကို ကွိုးစားရုနျးကနျနတေုနျးမှာပဲ သငျ့ရဲ့ ဦးတညျရာကိုရှာဖှမေိနပွေီဆိုရငျတော့ အဲဒီဇဝဇေဝါဖွဈတဲ့ သံသယစိတျတှကွေောငျ့ သငျမကျြစိလညျ လမျးပြောကျနိုငျတယျလေ။
ဒါပမေဲ့ ဒီလိုမြိုး မကျြစိလညျလမျးပြောကျတာထုံးစံပါပဲ။
အဲဒီလိုမြိုး ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှေ တောငျပုံယာပုံပါပဲ။
သငျ့ရဲ့ စိတျကူးအိမျမကျကွီးက အခွမေခိုငျ ယိုငျလဲသှားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အခု သငျလိုခငျြတာကို မသိတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ လမျးပြောကျသှားပွီလေ။
ဒီလိုမှမဟုတျရငျလဲ သငျဘယျကိုဦးတညျနလေဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူး။ ပွီးတော့ သငျက ပတျဝနျးကငျြရဲ့ လှမျးမိုးမှုခံရပွီး အခွားသူမြားရဲ့မြှျောလငျ့ခကျြတှကေ ဘာကိုရှေးသငျ့တယျဆိုတာ ပွောပွပေးနတေယျ။
သငျကိုယျတိုငျ ဘာလိုခငျြလဲဆိုတာကို သခြောမသိတဲ့အတှကျ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျလိုခငျြ၊ ဖွဈခငျြခဲ့တဲ့အရာကို မဖှငျ့ဟရတဲ့အတှကျ သငျဟာ သူမြားပါစပျမှာပဲ လမျးဆုံးသှားသလို ဖွဈပွီပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျတကယျဖွဈခငျြခဲ့တဲ့ စိတျကူးအိပျမကျနဲ့ လမျးကွောငျးလှဲပွီး နောကျကွောငျးပွနျလှညျ့ဖို့မဖွဈနိုငျတော့ဘူးပေါ့။
သငျ့ကိုယျသငျ ပွနျပွီး မေးခှနျးထုတျဖို့အတှကျ မေးခှနျးကောငျးတှအေမြားကွီးရပါတယျ။
သငျ့ရညျမှနျးခကျြလမျးကွောငျးပျေါကိုပွနျရောကျဖို့ သငျ့အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အသိညဏျပညာတှကေိုပေးမယျ့ မေးခှနျးတှပေေါ့။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျ့ရဲ့အတိတျကို သသေခြောခြာ ပွနျသုံးသပျနိုငျမှ ကောငျးမှနျတဲ့ အနာဂတျတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဘယျနရောတှရေောကျခဲ့တယျ၊ ဘာတှဖွေဈခဲ့တယျဆိုတာ သိနိုငျမှ မိမိဘဝ ဘယျကိုဦးတညျနလေဲဆိုတဲ့ အဖွတှေေ၊ အခွအေနတှေကေို သိရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့သငျမကျြစိလညျလမျးပြောကျနပွေီဆိုရငျ အကောငျးဆုံးလုပျသငျ့တာက သငျ့ရညျရှယျခကျြလမျးကွောငျးကို ပွနျလညျတညျဆောကျဖို့ အဓိက အထောကျအကူဖွဈမယျ့ သငျကငျြလညျရာ နယျပယျအသီးသီးကို စစေ့ငှေ့ငှပွနျလညျဝဖေနျသုံးသပျဖို့ပါပဲ။
၁. သငျသာလြှငျ အဓိက။
သငျသာလြှငျ အဓိကဆိုတော့ ကလေးစာသငျခနျးထဲက နံရံကပျပိုစတာလိုဖွဈနပွေီပေါ့။ အမှနျတကယျတော့ ဆိုလိုရငျးအဓိပ်ပာယျကို ဖျောထုတျဖို့အတှကျ မီးမောငျးထိုးပွတဲ့အရာတဈခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ ဘာဖွဈသငျ့တယျဆိုတာကို ပုံစံခှကျခဖြို့ ကွိုးစားနကွေတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပုံစံခှကျခတြယျဆိုတာကို ပွနျစဉျးစားကွညျ့လိုကျတိုငျး ကြှနျတျောတို့ဘဝကို ကြှနျတျောတို့က ဘောငျခတျကနျ့သတျလိုကျသလိုပါပဲ။ အဲဒီပုံစံခှကျတှနေဲ့အတူ အဆငျပွသေလိုနလေိုကျခွငျးက မကျြစိလညျလမျးပြောကျဖို့အလှယျဆုံး နညျးပါပဲ။ ကိုယျ့အမူအကငျြ့၊ ကိုယျ့စိတျကူးအတိုငျး ကိုယျ့ဘဝလမျးခရီးကို မလြှောကျလှမျးဘူးဆိုရငျ မှနျကနျတဲ့အခှငျ့အလမျးတှကေ သငျ့ဆီကိုရောကျလာမှာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျပိုငျတဲ့လူတဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျက သငျ့ကိုသငျအမွဲပွောနတေဲ့ ပွောငျးလဲသငျ့တဲ့အရာတှကေနေ စတငျကာ ပွနျလညျဆနျးစဈသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျ့စတိုငျ ကိုယျသာလြှငျ ပဓာနဖွဈဖို့အရေးကွီးပါတယျ။
၂. လှနျခဲ့တဲ့တဈနှဈက သငျ့ကိုအားအငျ အဖွဈစခေဲ့ဆုံးအရာကို ပွနျလညျရှာဖှပေါ။
နှဈတဈနှဈအတှငျးမှာ အလုပျတှအေမြားကွီးလုပျခဲ့တယျ။ တဈခြို့အရာတှကေိုကြှနျတျောတို့တှေ နှဈသကျသဘောကခြဲ့တယျ။ တျောတျောမြားမြားကိုတော့ မပေ့ဈကုနျတာမြားပါတယျ။ မကွိုကျနှဈသကျခဲ့တဲ့ အရာတှကေလညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လုပျခဲ့တဲ့၊ ပွောခဲ့တဲ့၊ စိတျကူးခဲ့တဲ့အရာတှကေတော့ ပွနျသတိရခငျြတဲ့အခါမှာ အလှယျလေး စဉျးစားမိလာတာပါပဲ။ လမျးပြောကျနတောကို ပွနျလညျတညျ့မတျမယျ့အစား ပွီးဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ်စရပျတှကေို ပွနျလညျအစားထိုးဆနျးစဈသငျ့ပါတယျ။
ဘယျအရာတှကေ သငျ့ရဲ့ဘဝကိုမွှငျ့တငျပေးတယျ။ ဘာတှကေတော့ အထောကျအပံ့မပေးခဲ့ဘူးဆိုတာကို သိရငျ သငျ ဘယျကိုဦးတညျရမယျဆိုတာ သိလာမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ဒီမေးခှနျးလေးတှေ ဖွကွေညျ့ဖို့အတှကျ ခဏလောကျအခြိနျပေးကွညျ့ပါလား။
၁။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈနှဈတာအတှငျးမှာ ဘာလုပျဆောငျခကျြက စိတျအားတကျကွှစပွေီး ဘာတှကေ စိတျအားယုတျလြော့စခေဲ့သလဲ ? ? ?
၂။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတဈနှဈအတှငျးမှာ ဘာလုပျဆောငျခကျြတှကေ စိတျစှမျးအားတှတေိုးပှားစပွေီး ဘာတှကေမြားစိတျအားထိုးကစြခေဲ့သလဲ ? ? ?
၃။ ပွီးခဲ့တဲ့တဈနှဈအတှငျးမှာ ဘာအလုပျတှကေ ဂုဏျယူစရာဖွဈစခေဲ့ပွီး ဘာတှကေ စိတျအားငယျစခေဲ့သလဲ ? ? ?
အဲဒီလိုမေးခှနျးတှဖွေကွေညျ့တဲ့အခါမှာ ပွနျစဉျးစားလို့ပျေါလာတဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေို သငျတျောတျော အံအားသငျ့သှားမှာပါ။
၃. ကိစ်စ သေးသေးလေးလေးကနေ စတှေးပါ။
အခုဆိုရငျ ဘယျအရာက စိတျပကျြအားလြှော့စလေဲ၊ ဘာတှကေ စိတျခှနျအားတှပေေးလဲဆိုတာ တဈစှနျးတဈစနားလညျလောကျပါပွီ။ အခုဆိုရငျ အဲဒီအကြိုးအပွဈတှနေဲ့ပတျသကျပွီး စာရှကျပျေါမှာခရြေးရမယျ့ အခြိနျရောကျပါပွီ။ စီမံကိနျးအကွီးကွီးဖွဈစရာမလိုပါဘူး။ စီမံကိနျးကွီးနရေငျ ယုံကွညျမှုရှိမှာမဟုတျဘူး အခုလုပျငနျးသေးသေးလေး၊ ကိစ်စသေးသေးလေးကနေ စတငျရပါမယျ။ ကိစ်စအသေးလေးက သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြကို စမျးသပျခှငျ့ပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ ခွတေဈလှမျးဟာ မသခြောမရရောတဲ့လုပျငနျးကွီးထကျစာရငျ ပိုပွီးသခြောမှုရှိပါတယျ။ အဲဒီလို ကိစ်စအသေးလေးတှကေပဲ သငျ့ကိုရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျရောကျဖို့ ပို့ဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။
လူဆိုတာ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့မကငျးပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့လမျးပြောကျနတေဲ့အခါမှာတော့ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ အဆကျဖွတျလာတတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုမဖှငျ့ဟဘူး၊ စိတျထဲမှာကွိတျခံစားတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုဝငျတှကေို ကြှနျတျောတို့စိတျဆငျးရဲနတေယျဆိုတာ မသိစခေငျြကွပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလိုစိတျဖွဈနတေဲ့အခါ အကွံညဏျပေးနိုငျတဲ့သူကို ရှာရပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလိုကူညီပေးဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့သူတှကေ သငျ့ကိုကွိုဆိုနတေယျဆိုတာကို တှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
သငျလမျးပြောကျနတောကို ကူညီဖွရှေငျးပေးပွီး သငျ့ရဲ့လမျးပြောကျနတေဲ့ခံစားခကျြကို နားလညျပေးဖို့နဲ့ သငျ့ကို စိတျဓာတျခှနျအားတှေ ပွနျလညျ့ရရှိအောငျ ကူညီထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့သူကို သိဖို့အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီညှနျကွားခကျြတှဖေတျပွီးတဲ့အခါ အဲဒီလို ကူညီပေးနိုငျတဲ့လူကိုခရြေးထားဖို့အခြိနျခဏလေးယူလိုကျပါ။
ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာပဲဖွဈဖွဈ သငျ့ကို အမွဲ ယုံကွညျပေးနသေူ၊ သငျဘယျလိုပဲပွောပွော လကျခံပေးနိုငျတဲ့သူဖွဈရမယျ။
ဘယျလိုလူက အစီအစဉျတှဆှေဲပေးနိုငျသလဲ၊ ဘယျသူတှကေ မဟာဗြူဟာ နညျးဗြူဟာတှေ ဆှဲပေးနိုငျလဲ?
ဘယျသူတှကေ သငျဟာ သူတို့တှနေဲ့အတူရှိနခြေိနျမှာ သူမြားနဲ့မတူ တမူထူးခွားတဲ့သူလို ခံစားရစသေလဲ?
အဲဒီလိုလူမြိုးတှနေဲ့တှဲပါ။ သူတို့တှနေဲ့အတူ ခံစားခကျြခငျြးဖလှယျပါ။ သငျ့ရဲ့ဦးတညျခကျြ၊ သငျလုပျရမယျ့ ကိစ်စအသေးအမှားလေးမြားကို သူတို့နဲ့တိုငျပငျပါ။ သူတို့က ကူညီလုပျဆောငျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ သူတို့တှကေ သငျ့ရဲ့စိတျကိုမွှငျ့တငျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လိုအပျတယျလေ။ ကိုငျးကြှနျးမှီ ကြှနျးကိုငျးမှီဆိုသလိုမြိုးပေါ့။
သငျ့ရဲ့စိတျဓာတျကလြမျးပြောကျနတေဲ့ ခံစားခကျြကတော့ တဈနတေ့ညျးနဲ့ ပြောကျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သငျက သူမြားရဲ့ပါးစပျမှာ လမျးမဆုံးဘူး၊ အတိတျကနသေငျခနျးစာယူနိုငျမယျ့ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးကွီးအတှကျ ကိစ်စအသေးအမှားလေးတှကေစပွီး ပွီးမွောကျအောငျလုပျနိုငျမယျ၊ သငျ့ကိုလမျးညှနျပေးမယျ့ လူကိုရှာနိုငျမယျဆိုရငျ သငျလမျးကွောငျးမှနျကိုပွနျလညျရောကျရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့စိတျကူးအိပျမကျတဈခုကပဲ သငျ့ရဲ့နောကျဆုံးခရီးလမျးဆုံးကို ရောကျရှိအောငျလမျးပွနိုငျပါတယျ။
ဘဝရည်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မယ့်အဆင့် ၃ ဆင့်။
သင့်ရဲ့ဘ၀ လက်ရှိအချိန်အခါမှာ ဘယ်နေရာကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးဖို့ဆိုတာ လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေက ဘယ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာ၊ ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကို လုပ်ရဲ့လားဆိုတာ၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးခွန်းထုတ်မိနေပြီဆိုရင် သင့်လိုမျိုး အခြားသူတွေလည်းပဲ အဲဒီလိုမေးခွန်းထုတ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကို သိထားရပါမယ်။
သင့်ဘ၀ကို ကြိုးစားရုန်းကန်နေတုန်းမှာပဲ သင့်ရဲ့ ဦးတည်ရာကိုရှာဖွေမိနေပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီဇဝေဇ၀ါဖြစ်တဲ့ သံသယစိတ်တွေကြောင့် သင်မျက်စိလည် လမ်းပျောက်နိုင်တယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး မျက်စိလည်လမ်းပျောက်တာထုံးစံပါပဲ။
အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ တောင်ပုံယာပုံပါပဲ။
သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်ကြီးက အခြေမခိုင် ယိုင်လဲသွားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခု သင်လိုချင်တာကို မသိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ လမ်းပျောက်သွားပြီလေ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ သင်ဘယ်ကိုဦးတည်နေလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ သင်က ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရပြီး အခြားသူများရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေက ဘာကိုရွေးသင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးနေတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို သေချာမသိတဲ့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လိုချင်၊ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာကို မဖွင့်ဟရတဲ့အတွက် သင်ဟာ သူများပါစပ်မှာပဲ လမ်းဆုံးသွားသလို ဖြစ်ပြီပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ လမ်းကြောင်းလွဲပြီး နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
သင့်ကိုယ်သင် ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ဖို့အတွက် မေးခွန်းကောင်းတွေအများကြီးရပါတယ်။
သင့်ရည်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ သင့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အသိညဏ်ပညာတွေကိုပေးမယ့် မေးခွန်းတွေပေါ့။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့အတိတ်ကို သေသေချာချာ ပြန်သုံးသပ်နိုင်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေရောက်ခဲ့တယ်၊ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မှ မိမိဘဝ ဘယ်ကိုဦးတည်နေလဲဆိုတဲ့ အဖြေတွေ၊ အခြေအနေတွေကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်မျက်စိလည်လမ်းပျောက်နေပြီဆိုရင် အကောင်းဆုံးလုပ်သင့်တာက သင့်ရည်ရွယ်ချက်လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ အဓိက အထောက်အကူဖြစ်မယ့် သင်ကျင်လည်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးကို စေ့စေ့ငှငှပြန်လည်ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ပါပဲ။
၁. သင်သာလျှင် အဓိက။
သင်သာလျှင် အဓိကဆိုတော့ ကလေးစာသင်ခန်းထဲက နံရံကပ်ပိုစတာလိုဖြစ်နေပြီပေါ့။ အမှန်တကယ်တော့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် မီးမောင်းထိုးပြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ပုံစံခွက်ချဖို့ ကြိုးစားနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံစံခွက်ချတယ်ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့က ဘောင်ခတ်ကန့်သတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ အဲဒီပုံစံခွက်တွေနဲ့အတူ အဆင်ပြေသလိုနေလိုက်ခြင်းက မျက်စိလည်လမ်းပျောက်ဖို့အလွယ်ဆုံး နည်းပါပဲ။ ကိုယ့်အမူအကျင့်၊ ကိုယ့်စိတ်ကူးအတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀လမ်းခရီးကို မလျှောက်လှမ်းဘူးဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေက သင့်ဆီကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ပိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်က သင့်ကိုသင်အမြဲပြောနေတဲ့ ပြောင်းလဲသင့်တဲ့အရာတွေကနေ စတင်ကာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်စတိုင် ကိုယ်သာလျှင် ပဓာနဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
၂. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က သင့်ကိုအားအင် အဖြစ်စေခဲ့ဆုံးအရာကို ပြန်လည်ရှာဖွေပါ။
နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ နှစ်သက်သဘောကျခဲ့တယ်။ တော်တော်များများကိုတော့ မေ့ပစ်ကုန်တာများပါတယ်။ မကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့၊ ပြောခဲ့တဲ့၊ စိတ်ကူးခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ ပြန်သတိရချင်တဲ့အခါမှာ အလွယ်လေး စဉ်းစားမိလာတာပါပဲ။ လမ်းပျောက်နေတာကို ပြန်လည်တည့်မတ်မယ့်အစား ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပြန်လည်အစားထိုးဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက သင့်ရဲ့ဘ၀ကိုမြှင့်တင်ပေးတယ်။ ဘာတွေကတော့ အထောက်အပံ့မပေးခဲ့ဘူးဆိုတာကို သိရင် သင် ဘယ်ကိုဦးတည်ရမယ်ဆိုတာ သိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ဖို့အတွက် ခဏလောက်အချိန်ပေးကြည့်ပါလား။
၁။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်က စိတ်အားတက်ကြွစေပြီး ဘာတွေက စိတ်အားယုတ်လျော့စေခဲ့သလဲ ? ? ?
၂။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်တွေက စိတ်စွမ်းအားတွေတိုးပွားစေပြီး ဘာတွေကများစိတ်အားထိုးကျစေခဲ့သလဲ ? ? ?
၃။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဘာအလုပ်တွေက ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဘာတွေက စိတ်အားငယ်စေခဲ့သလဲ ? ? ?
အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေဖြေကြည့်တဲ့အခါမှာ ပြန်စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သင်တော်တော် အံအားသင့်သွားမှာပါ။
၃. ကိစ္စ သေးသေးလေးလေးကနေ စတွေးပါ။
အခုဆိုရင် ဘယ်အရာက စိတ်ပျက်အားလျှော့စေလဲ၊ ဘာတွေက စိတ်ခွန်အားတွေပေးလဲဆိုတာ တစ်စွန်းတစ်စနားလည်လောက်ပါပြီ။ အခုဆိုရင် အဲဒီအကျိုးအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာချရေးရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ စီမံကိန်းအကြီးကြီးဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ စီမံကိန်းကြီးနေရင် ယုံကြည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး အခုလုပ်ငန်းသေးသေးလေး၊ ကိစ္စသေးသေးလေးကနေ စတင်ရပါမယ်။ ကိစ္စအသေးလေးက သင့်ရဲ့ခံစားချက်ကို စမ်းသပ်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ခြေတစ်လှမ်းဟာ မသေချာမရေရာတဲ့လုပ်ငန်းကြီးထက်စာရင် ပိုပြီးသေချာမှုရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ကိစ္စအသေးလေးတွေကပဲ သင့်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူဆိုတာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့မကင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လမ်းပျောက်နေတဲ့အခါမှာတော့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အဆက်ဖြတ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုမဖွင့်ဟဘူး၊ စိတ်ထဲမှာကြိတ်ခံစားတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကို ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာ မသိစေချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါ အကြံညဏ်ပေးနိုင်တဲ့သူကို ရှာရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုကူညီပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့သူတွေက သင့်ကိုကြိုဆိုနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
သင်လမ်းပျောက်နေတာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပြီး သင့်ရဲ့လမ်းပျောက်နေတဲ့ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးဖို့နဲ့ သင့်ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပြန်လည့်ရရှိအောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူကို သိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီညွှန်ကြားချက်တွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီလို ကူညီပေးနိုင်တဲ့လူကိုချရေးထားဖို့အချိန်ခဏလေးယူလိုက်ပါ။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို အမြဲ ယုံကြည်ပေးနေသူ၊ သင်ဘယ်လိုပဲပြောပြော လက်ခံပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။
ဘယ်လိုလူက အစီအစဉ်တွေဆွဲပေးနိုင်သလဲ၊ ဘယ်သူတွေက မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာတွေ ဆွဲပေးနိုင်လဲ?
ဘယ်သူတွေက သင်ဟာ သူတို့တွေနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့သူလို ခံစားရစေသလဲ?
အဲဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့တွဲပါ။ သူတို့တွေနဲ့အတူ ခံစားချက်ချင်းဖလှယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဦးတည်ချက်၊ သင်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စအသေးအမွှားလေးများကို သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ သူတို့က ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေက သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုအပ်တယ်လေ။ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီဆိုသလိုမျိုးပေါ့။
သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျလမ်းပျောက်နေတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ တစ်နေ့တည်းနဲ့ ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သင်က သူများရဲ့ပါးစပ်မှာ လမ်းမဆုံးဘူး၊ အတိတ်ကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးအတွက် ကိစ္စအသေးအမွှားလေးတွေကစပြီး ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်၊ သင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ့် လူကိုရှာနိုင်မယ်ဆိုရင် သင်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုကပဲ သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးကို ရောက်ရှိအောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်။
Previous သဘာဝကဖနျတီးထားတဲ့အတိုငျး သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ လှပပွညျ့စုံနကွေောငျး သကျသပွေနတေဲ့ဓာတျပုံမြား။
Next နစေ့ဉျနတေို့ငျးအသုံးပွုလို့ရတဲ့ မတ်ေတာပှားနညျး။